Sanbaloolshe “Libaax Jiis Ah Lo Wuu Fiijiyaa” (Muuqaal) – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASanbaloolshe “Libaax Jiis Ah Lo Wuu Fiijiyaa” (Muuqaal)
Sanbaloolshe “Libaax Jiis Ah Lo Wuu Fiijiyaa” (Muuqaal)
Taliyahii hore ee NISA C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolse oo wareysi gaar ah siiyey Warbaahin ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka, xil ka qaadistiisa iyo sidoo kale qaabkii uu u waayey kursigii golaha shacabka ee uu u tartamay.
Ugu horreyn, Warqaat.Com ayaa Sanbaloolshe weydiisay inuu mucaaradka ku biiray, maadaama dhowaan uu dhaliilo u jeediyey DFS, wuxuuna si dadban u sheegay in wadada u furan hadda ay tahay in dhanka mucaaradka ku biyo shubto.
Waxa uu ka hadlay doorashadii ka dhowaan ka dhacday magaalada Jowhar ee uu isagu ku waayey kursigii golaha shacabka ee uu u tartamayey ayuu sheegay in sababta ugu weyn ay tahay qarash badan oo dhanka Villa Soomaaliya laga direy, islamarkaana badi ergadii wax dooraneysay la iibsaday waa sida uu hadalka u dhigaye.
Mar uu soo hadal qaaday qaabka xilka NISA loogu magacaabay ayuu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka helay ballanqaad ahaa in Afar Sano ay wada dhammeysan doonaan, maadaama uu weynayo marka taliye laga dhigo kursigii uu ka hayey golaha shacabka.
Taas bedalkeeda ayuu sheegay in looga baxay balanqaadyadii, islamarkaana loo weeciyey in laga boobo kursigii golaha shacabka ee uu u tartamay.
Warqaat.Com ayaa sidoo kale Sanbaloolshe weydiisay inuu dareemayo xilligaan in ay awooddiisa hoos u dhacday, wuxuuse yiri “Libaax jiis ah Lo wuu fiijiyaa”
Sidoo kale Sanbaloolshe ayaa sheegay in talada dalka ay jiraan iney si dad ban wax uga maamulaan rag aan ahayn madaxda dalka waa sida uu hadalka u dhigay.
Halkaan hoose ka daawo wareysiga oo dhinacyo badan taabanaya:
40,822 total views, 1,575 views today
40,822 total views, 1,575 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
40,895 total views, 1,575 views today
40,895 total views, 1,575 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
40,907 total views, 1,575 views today
40,907 total views, 1,575 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
40,932 total views, 1,576 views today
40,932 total views, 1,576 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
40,962 total views, 1,575 views today
40,962 total views, 1,575 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]